खाजा विधि - स्यान्डविच केक | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
खाजा विधि - स्यान्डविच केक
पर्व तालिकामा हेर्न र स्यान्डविच केकको रूपमा मूल, मुख-पानी पिउने एपेटाइजरको स्वाद लिन राम्रो देखिन्छ। यो डिश हार्दिक छ, यो खाना पकाउन मा आकर्षक, छोटो छ। स्यान्डविच केक सलाडहरू फेड गर्न राम्रो सहयोगी हुनेछ।
यो चाखलाग्दो खाना पिकनिक, स्कूलको ब्रेकफास्ट, कामको खाजामा, खाजाको लागि जब तपाइँको मनपर्ने चलचित्र हेर्दा उत्तम हुन्छ।
आवश्यक उत्पादनहरू: 400 gr गहुँ रोटी, 150 जीआर। सॉसेज वा हेम, वा यसको मिश्रणहरू, 100 चीज वा फेटा चीज, 100 जीआर। सला, 1 उमालेको अण्डा, 50 जीआर। मक्खन
पकाउने क्रम गहुँको रोटीलाई आधा भागमा विभाजन गर्नुहोस् र टुक्रा हटाउनुहोस्, यसलाई 1,5-2 मा छोड्नुहोस्, हेर्नुहोस्।
आवश्यक उत्पादनहरू - हेम, सॉसेज, फेटा चीज वा चीज, खिया परिणामस्वरूप मिश्रण मिक्स गर्नुहोस्, यसलाई रोटीको खाली भागमा राख्नुहोस्। आधा भाग जोड्नुहोस्, मोटो कागजमा रोटी लपेट्नुहोस्, फ्रिजमा राख्नुहोस्। प्रयोग गर्दा पातलो स्लाइसमा केक काट्नुहोस्।
उत्पादनहरूको उपलब्धतामा निर्भर मिश्रणको सामग्री परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
TOP5 स्वादिष्ट स्यान्डविच बनाउने तरिकाहरू
10 मिनेटमा पिज्जा स्यान्डविच
सबै अवसरहरूको लागि स्यान्डविच - भिडियोको साथ विधि!
Dobryninsky केक नुस्खा?
प्यानमा केक अदुवा कसरी पकाउने, फोटो वा भिडियोको साथ एउटा नुस्खा?
क्र्याब स्टिकबाट राफेलो - एक एपेटाइजरको लागि सब भन्दा चाँडो र सजिलो रेसिपी
लेमन meringue केक: तस्विरको साथ नुस्खा। स्यान्डविच केक लेमन ले क्यान्सर र मिरेर्यु संग
60 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,411 प्रश्नहरू।